I-Apple ifumana ukuqhubela phambili ukuthengisa i-Apple TV e-China ngemida emininzi | Ndisuka mac
I-Apple ifumana ukuqhubela phambili ukuthengisa i-Apple TV e-China ngemida emininzi
I-Apple TV yokuqala yafika kwintengiso kwiminyaka eli-15 eyadlulayo. Ukusukela ngoko, uApple usivuselela rhoqo esi sixhobo, esi sixhobo okwangoku ukwisizukulwana sesithandathu ngeApple TV 4K (isizukulwana sesibini). Ngaphandle kokuba kwintengiso kangangeminyaka emininzi, ayikaze ithengiswe e-China.
Nangona kunjalo, ngokweendaba zaseTshayina uSina, inkampani esekwe eCupertino ifumene ukuqhubela phambili kokumilisela esi sixhobo kweli lizwe uLawulo ngokuBanzi lweeNdaba kunye neempapasho ukongeza kuLawulo lukaRhulumente lweRadio, iCinema kunye neTelevishini.
I-Apple TV engenamsebenzi
Ezi ndaba zinokuba ngumdla kubasebenzisi beemveliso ze-Apple kweli lizwe ukuba kungenjalo Iimuvi ze-iTunes, iApple TV +, iApple Music kunye neApple Arcade, ayifumaneki elizweni. Ukushiya iApple Music ecaleni, ukungabinakho ukusebenzisa indawo yokuqeshisa imovie kunye nokuthenga iqonga, okanye iApple TV + inkonzo yokusasaza ividiyo ukongeza kwiqonga lemidlalo yokubhalisela, ekuphela kwento eluncedo abanokuthi bayifumane abasebenzisi baseTshayina kulo ilizwe Umsebenzi we-AirPlay.
Nangona kunjalo, lo msebenzi uya usanda iyafumaneka kwinani elikhulu leeTV ezikrelekreleKe, ngokobuqu, andinakuqonda ukuba yeyiphi inomdla kwinkampani esekwe eCupertino ekusenokwenzeka ukuba kufuneka isungule esi sixhobo kule marike.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba INetflix ayikho nakweli lizwe Njengamanye amaqonga evidiyo asasazayo. Okwangoku, iwebhusayithi ye-Apple e-China ayithethi ngokuqaliswa kwesi sixhobo. Esi sizukulwana sesine, esinokugcinwa ukusukela nge-30 ka-Epreli, asizukuqala ukufikelela kubasebenzisi kude kube phakathi ku-Meyi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ifumana ukuqhubela phambili ukuthengisa i-Apple TV e-China ngemida emininzi
Amaqela kaMicrosoft e-macOS aya kuhlaziywa kwakhona ekupheleni kuka-Agasti ongeze uxinzelelo lwengxolo
Inkqubo yokukhalisa i-alamu ifumana ibango kwi-ADT